Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ụzọ nche na -agbakwunye ndị otu ya
SecurityTrails, Ngụkọta Ntanetị Ntanetị, na -agbakwunye ndị otu ya site na iweta Scott Donnelly dị ka onye isi oche ahịa na Taylor Dondich dị ka onye isi ndị ọrụ teknụzụ. Ndị otu otu ogologo oge Courtney Couch na Kris Lopez na -arụ ọrụ ọhụrụ iji chịkọta ndị otu ahụ.
"Taylor na Scott na -esonye na oge zuru oke maka SecurityTrails. Site na mwepụta nke Mbelata Mbelata Mwakpo anyị, anyị na -enwe nnukwu nsogbu maka nnukwu ọgbakọ. Ahụmịhe ha ga -enyere aka hụ na SecurityTrails na ndị ahịa ya na -eme nke ọma. ” - Chris Ueland, onye isi nke SecurityTrails.
Scott Donnelly na -ewetara ọtụtụ ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ, ebe ọ jigidere ọrụ ndị isi ahịa na Expanse na Ederede Ọdịnihu. N'oge ya dị ka onye isi oche nke Ngwọta Nka na Ọdịnihu e dekọrọ, Scott mere ka njikọta ọgụgụ isi nchekwa ha na ọtụtụ ndị isi IT na ngwaahịa nchekwa. Ọbịbịa ya na SecurityTrails ga -agba mbọ hụ na ndị ahịa ghọtara uru Ngụkọta Ntanetị Ntanetị n'ofe nzukọ ha niile.
Taylor Dondich na -eweghara ọrụ dịka onye isi ndị ọrụ nka ọhụrụ. Co-tọrọ ntọala Courtney Couch ga-elekwasị anya ugbu a n'ịchọta ụzọ ndị ka mma iji chọpụta akụrụngwa ndị ahịa yana ihe egwu dị na ọrụ ọhụrụ ya dị ka onye isi ọhụụ.
Dondich esorola ụlọ ọrụ dịka Yahoo na Splunk rụọ ọrụ na oghere teknụzụ ihe karịrị afọ iri abụọ, yana VP nke Injinịa maka MaxCDN. Ahụmịhe ya na ọrụ onye isi teknụzụ, onye ndụmọdụ na injinia ga -eduzi SecurityTrails iji zụlite teknụzụ ọhụụ ma hụ na ndị ahịa anaghị enwe ihe isi ike na -amaghị.
N'ịbụ onye rụburu ọrụ dị ka onye njikwa mmekọrịta mmekọrịta na SecurityTrails, nzụlite azụmaahịa Kris Lopez yana ọmarịcha mmekọrịta mmadụ na ibe ya na njikwa njikwa na -eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke dị ka onye isi ndị ọrụ ọhụrụ.
SecurityTrails na -ewepụta mgbanwe ngwaọrụ ndị a iji mee ka ha ruo n'ọkwa ọzọ na iji hụ na ha ga -aga n'ihu na -enye data kacha mma dị iji nyere ụlọ ọrụ aka ichebe onwe ha.